नेपालीलाई भारतमा बस्न नदिने भारतीय गृहमन्त्रीको घोषणा !
नेपालीहरु रोजगारीका लागि मात्रै नभई अन्य प्रयोजनले पनि भारतमा बस्दै आएका छन् । भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषीहरु अब अप्ठे’रोमा पर्न सक्ने स’म्भावना देखिएको छ । भारतले अब आफ्ना देशमा रहेको आप्रवासीहरुलाई देशबाट नि’काल्ने घो’षणा गरेको छ ।यस अघि आसाममा ला’गू गरिएको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) अब मुलुकभर लागू गर्ने घोषणा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको थियो । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले अब छिट्टै यो नियम लागू गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चे’तावनी दिइसकेका छन् ।
भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् । तपाईंलाई कसैले घु’स्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’मन्त्रीले अब भारतमा बस्न भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने जानकारी दिएका छन् । भारतीय बाहेक अरु गैरकानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने उनको भनाई रहेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले सो कुरा उल्लेख गरेको भएर देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए । यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत का’रबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आसाममा मात्रै झण्डै १९ लाख विदेशी नागरिक भएको बताएको छ ।’
भारतीय गृहमन्त्रीको यस्तो घो’षणा – भारतका गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित शाहले अ’वैध रुपमा बस्दैआएका आ’प्रवासीलाई दे’शनि’काला गर्ने चे”तावनी दिएका छन् । एक कार्यक्रममा उनले भारतमा अ’वैध रुपमा बस्ने विदेशीलाई देशबाट निकाल्ने बताएका हुन् । इंग्ल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, अमेरिका लगायत मुलुकको कानुनको प्रसंग कोट्याउँदै भारतमा पनि त्यस्तो सम्भव नहुने बताए । साथै सबै नागरिकको नाम दर्ता हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । भारतमा ‘नेश्नल रजिस्टर फर सिटिजन (एनआरसी)’को लागु गर्ने सवाल चलिरहँदा शाहले यस्तो बताएका हुन् ।
आसाममा हालै यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने सन्दर्भमा नागरिकहरु छुटेको भन्दै विवाद भएको थियो । शाहले पनि एनआरसी लागु गर्नेबारे जोड दिएका हुन् । बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट भारत आइ अ’वैध रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई लक्षित गरी यहाँ आप्र’वासीमाथि क’डाइ गर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । शाहको यस्तो घो’षणाले भारतमा ब’स्दैआएका नेपालसहित छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने आशंका गरिएको छ । खासगरी लामो समयदेखि भारतमा बस्दै काम गर्दै आएका तथा व्यवसाय गर्दैआएका छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई यस्तो नियमले क’डाइ गर्नसक्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। एजेन्सी